> Resource> Video> WeVideo: Easily Mepụta Videos Online
Ọ bụrụ na ị na-achọ a ngwa weebụ ịmepụta na dezie gị videos, WeVideo bụ ikekwe ihe dị gị mkpa. Nke a online n'elu ikpo okwu na-enyere gị ike videos na ígwé ojii. Nke ahụ bụ ikwu, ọ bụla otu atụmatụ bụ inweta online, ya ka ị ghara nwere ibudata ọzọ software. N'okpuru ebe a bụ Get-malite ndu n'ihi na WeVideo. Soro ya ka ọ na-adị mfe ike videos online.
1 Sign na WeVideo
Ọ bụ free ka malitere na WeVideo. Ị dị nnọọ mkpa iji mee ka onye na akaụntụ site na ịnye adreesị ozi-, na-eke a na aha njirimara na paswọọdụ. I nwekwara ike gị banye preexisting Facebook, Yahoo ma ọ bụ Gmail akaụntụ.
2 mbubata gị foto ma ọ bụ vidiyo gaa na WeVideo
Mgbe ahụ, pịa Bulite Media na Storyboar d taabụ ma ọ bụ gaa na Bulite taabụ iji mbubata foto na obere vidiyo na kọmputa gị ma ọ bụ mgbasa ozi akaụntụ. I nwekwara ike kụrụ Record na jikọọ na gị onwe gị igwefoto ngwaọrụ idekọ a video clip.
NDỤMỌDỤ: WeVideo enye atọ edezi ụdịdị (storyboard, Standard usoro iheomume na Advanced usoro iheomume). Ị nwere ike ịgbanwee n'etiti ụdịdị site na ịpị triangle na akara ngosi na elu nri akuku nke ihuenyo na ndị nchịkọta akụkọ.
3-egbu maramara gị WeVideo e kere eke
Mgbe ahụ, ịdọrọ na dobe gị ọdịnaya ọ bụla iji ị chọrọ. Nke a ga-enyere gị aka hazie gị ọdịnaya. Mgbe ahụ, ị dezie video dị ka amasị gị. Ka ihe atụ, i nwere ike ewepụtụ gị na obere vidiyo na-elekwasị anya na ụfọdụ isi oge ma ọ bụ na bee ogologo video n'ime nta n'anya. I nwekwara ike ịgbakwunye ederede, mmetụta, egwú, na-emeputa gị videos. Ma ọ bụ gaa na Theme taabụ iji tinye ụfọdụ ihe gburugburu gị e kere eke.
3 ebipụta gị videos
Mgbe ọ gụchara gị e kere eke, na-aga Asuanetop bulite gị videos ozugbo na YouTube, Google Drive, Facebook, na Twitter. Ị pụrụ ọbụna ịgbanwe video mkpebi ma ọ bụ ka gị ọdịnaya si visibiliti site n'ịhọrọ nhọrọ dị ka "nzuzo ma ọ bụ ọha na eze".
Ọ bụ ezie na WeVideo enye ụfọdụ isi video edezi ọrụ, e nwere ọtụtụ atụmatụ ugbu a na desktọọpụ video editọ na WeVideo adịghị enye, dị ka onye na-adịghị na ngwa ngwa ngagharị na ụzụ iwepụ, ole na ole aha. Ọ bụrụ na ị chọrọ ike a ọzọ ndị ọkachamara video, Wondershare Filmora (mbụ Wondershare Video Editor) ukwuu tụrụ aro. Nke a ọrụ enyi na enyi video edezi ngwá ọrụ nwere ụyọkọ pụrụ iche atụmatụ nke ekwe ka ị na-adị mfe na-etinye ọnụ gị na obere vidiyo, ederede na music. Ị nwere ike ide dị iche iche mmetụta dị ka nzacha, foto na-na-na foto a, ikwu n'ụzọ na ọtụtụ ndị ọzọ ga-esi na ọkachamara anya nke gị videos naanị nkeji. Ebe i nwere ike na-nkọwa ndị ọzọ banyere nke a Video Editor.
TP Video Editor: Olee dezie TP Video
20 Ngwa Motion Videos na ị chọrọ ile
Olee otú Ọkụ eMule Movies ka DVD
Olee otú iji tọghata Video_TS ka ISO Easily na ngwa ngwa